Ukugcinwa kwindlu kwidijithali: Ungayithengisa njani ipropathi yakho ye-Post-COVID yokuBuya ngokuFanelekileyo | Martech Zone
Ukugcinwa kwindlu kwidijithali: Ungayithengisa njani ipropathi yakho yePost-COVID yokuBuya ngokuFanelekileyo
NgoLwesine, uJuni 10, 2021 NgoLwesine, uJuni 10, 2021 Douglas Karr
Njengoko bekulindelwe, ithuba kwimarike yasemva kwe-COVID itshintshile. Kwaye ukuza kuthi ga ngoku kubonakala kucacile ukuba itshintshelwe ukuthanda abanini bepropathi kunye nabatyali bezindlu. Njengokuba ibango lokuhlala ixesha elifutshane kunye neendawo zokuhlala eziguqukayo ziqhubeka nokunyuka, nabani na onedilesi- nokuba likhaya eligcweleyo leholide okanye nje igumbi lokulala elisecaleni- umiswe kakuhle ukuze enze imali kulo mkhwa. Xa kuziwa kwimfuno yokurenta yexesha elifutshane, phantse akukho siphelo emehlweni.
Ukongeza, akukho supply emehlweni. Umphathi omkhulu weAirbnb, uBrian Chesky, ukubhengezile oko phantse 1 yezigidi zemikhosi ingafuneka ukuzalisekisa iimfuno zeemarike. Oku kuyinyani ngokukodwa kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, udidi lwe-65% yeepropathi ze-Airbnb zezakho. Izakhiwo ezininzi ezineminyango engama-40 okanye ngaphantsi ziye zabona ezinye zeembuyekezo ezilungileyo ngoku.
Umngcipheko ophantsi kunye nomvuzo ophakamileyo ulindele nawuphi na umnini wezindlu, nokuba kusekhaya, ukusebenza ngezandla okanye inqanaba elipheleleyo, iipotifoliyo ezininzi. Kodwa kuyo nayiphi na imeko, idatha, ukuthengisa, kunye noomatshini ngumhlobo osenyongweni womnini. Iindlela zakudala zentengiso ziya kuluphosa utshintsho kwimfuno, kwaye ukusilela ukwenza inkqubo yokungena ngamandla yabasebenzi-ngakumbi ngokuqesha ixesha elifutshane- kunokwenza ukuba utyalomali lokuthengisa izindlu nomhlaba luye emazantsi. Ngokucwangciswa okufanelekileyo, ukulungiselela, kunye notyalo-mali olunokulawulwa, abanini bepropathi banokuziva benentembelo yokuba bakubeke ngokufanelekileyo ukurenta kwabo ngempumelelo ye-post-COVID.
I-COVID-19 yayiyingxaki yehlabathi; ziziphumo kunye nokutshintsha kweembono kwindalo iphela. Oko kuthetha ukuba iindwendwe ezininzi zasemva kwe-COVID zifuna izinto ezifanayo, kwaye inyathelo lokuqala kuwo nawuphi na umbuki zindwendwe uya kuqinisekisa ukuba ezo zinto zilungile. Uluhlu luluhlu kufuneka lubhengeze inkqubo yokucoca phakathi kweendwendwe, kunye neendlela zokucocwa kwenkunkuma ngaphakathi kwindawo yokuhlala. Abamkeli abangena kwiinkqubo ze-Airbnb zamanyathelo amahlanu okucocwa okuphuculiweyo bafumana ukuqaqanjiswa okukhethekileyo kuluhlu lwabo, olubonisa umnqweno phakathi kwabaqeshi wokuba babe nolo hlobo lokubonwayo. Ukugcinwa kwendlu kwakuyinto eyayiqhubeka emva kwezigcawu; ngoku, iindwendwe zifuna ukubona izisombululo zezempilo nezokhuseleko ukuze bakholelwe kukhuseleko lwepropathi.
Ababuki zindwendwe kufuneka kwakhona bagcine izibonelelo zomsebenzi zekhaya xa bethengisa uluhlu lwabo. Kangangeenyanga, i-intanethi engenazingcingo yenye yezona zinto zifunwa kakhulu phakathi kwabahambi. I-Airbnb ikhuphe uphononongo olubonisa ababuki zindwendwe abongeza indawo yokusebenza yeelaptop bafumana umvuzo we-14% ngaphezulu koogxa babo. Imifanekiso ekumgangatho ophezulu yendawo yokusebenzela ebanzi-mhlawumbi ikofu ehambelana nayo, umshicileli, isantya esiphezulu se-Intanethi- iya kutsala enye yezona zinto zixabisekileyo zexesha le-COVID: indawo yokusebenzela evela naphina.
Udweliso oluhambelanayo-Okukhona kukudibana
Utshintsho belusoloko luqhubeka kwimarike yasemva kwe-COVID. Endaweni yokuzama ixesha lokuthengisa kunye nokunyamezela ingqikelelo yokufumana ixabiso elifanelekileyo, abanini bepropathi banokwenza utyalomali olunye olusebenzayo ukuphelisa iintloko zentengiso. Ukuthengisa okuzenzekelayo kwenza ukuba amaxabiso alungiselelwe lula. Abatyalomali kunye nabanini banokutyala imali kubuchwephesha obuya kuvavanya imfuno yentengiso kwaye badwelise ipropathi kwinqanaba lexabiso elifanelekileyo kwaye bahlale ubude. Inokutshintsha nayiphi na indlela, ibhenele kwiindwendwe ezininzi ezineemfuno ezahlukeneyo ukuya kuthi ga kubude okanye kuhlahlo-lwabiwo mali. Ingadwelisa ipropathi efanayo kwiindawo ezininzi zokurenta zexesha elifutshane, nganye nganye izisa abaphulaphuli abohlukileyo.
Kwaye ngenkqubo yentengiso ezenzekelayo, kubalulekile ukuba abanini kunye nabatyali mali baqokelele idatha malunga nokuba uluhlu ngalunye lwenziwa njani. Isango lomnini linokuba yindawo elungileyo yokubeka amanani abalulekileyo, ukugcina umkhondo wengeniso, imbali yokubhukisha, inkcitho kunye neentlawulo kwindawo enye. Abatyalomali banokuyiqonda impumelelo yezicwangciso ezahlukeneyo zentengiso, kunye nokulandela umkhondo wamaxabiso kunye nokuhlala ubude bemodeli etsala uninzi lweentengiso zabo. Banokuzenzekelayo ukwenza iintlawulo zabo, balungelelanise ukubalwa kwabo, kwaye bagcine umgca wabo osezantsi ngelixa beqokelela iimetric ezibalulekileyo: ukuhlala, ingeniso yenyanga, njl.
Abatyalomali kunye nabanini baphulukana nexesha kunye namandla engqondo xa bezama ukuthambekela kwiminutia yengeniso yokuqesha. Ukulawulwa kwezandla kwexesha elifutshane lokuqesha ngokukhawuleza kudibanisa. Abanini bazama ukubhala ngokungekho mthethweni, ukungena kweendwendwe kunye nokuqinisekiswa kwe-ID, iintlawulo kunye nokucoca phakathi kwako konke ukuhlala. Ngokukhawuleza kunokuba umnini angacwangcisela oko, ezo zinto zolawulo ziba ngumsebenzi osisigxina, ubasuse kude kwinjongo yokuqala efanayo: ukumisela umvuzo wokungena.
Abanini banokwenza utyalo-mali lwexesha elinye kwiplatifti yolawulo lwepropathi ukubanceda balawule ukusebenza kwabo ngokufanelekileyo kwaye banike iindwendwe zabo amava aphezulu, angenazandla. Iinkqubo ezihlanganisiweyo ze-smartphone zinokunceda iindwendwe ngokujonga isazisi, kunye nokuhambisa isitshixo sokungena simahla ukuze zilungele. Abanini banokuphakamisa ubambiswano kulawulo ngexesha lenkqubo yengeniso, nabo. Banokuvavanywa ngokuzenzekelayo ipropathi ngeemfuno zokucoca kunye nolondolozo, kwaye banokukhupha ngokuzenzekelayo loo misebenzi bayinike amaqela okugcina izindlu kunye neengcali zolondolozo. Iipropathi zinokuthi emva koko zisebenze ngokuguqukayo ngokusekwe kwiimfuno ezikhawulezileyo, zivumela abanini ukuba babekho naphi na emhlabeni xa ingeniso isenzeka.
Eyona asethi iqhuba kakuhle kwimarike yasemva kobhubhane kukuguquguquka. Ukuqeshiswa kwexesha elifutshane lelona lisondeleyo ukuba umtyalomali angaza. Abantu baphonononga indawo ezintsha ngeendleko eziphantsi zokuphila, ukuhamba ngotshintsho olufunekayo, okanye ukuvavanya indawo ezintsha ngenkululeko yabo entsha eofisini. Ukuqeshiswa kwexesha elifutshane kuyilelwe intshukumo yasemva kobhubhane. Nabani na onikezela ngerente-igumbi lokulala ngaphezulu kwegaraji okanye ikhaya leholide-kubambe ithuba elimangalisayo. Ngokuthengisa okuzenzekelayo, ukunikezelwa kweendwendwe ezilungiselelwe, kunye nezicwangciso zolawulo lwepropathi, wonke umnini uya kubekwa ngokufanelekileyo ukuba athathe inxaxheba kukhawuleziso lwegolide lwasemva kobhubhane.
tags: Airbnbbian cheskyi-covid19intlekele yehlabathiMultifamilybhubhaneulawulo lwepropathiizindlu ezithengiswayoinvestemtnusetyenziso lwe-smartphone